တတိယ ထောင်စုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ မှ သက္ကရာဇ် ၃၀၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် အဆုံးသတ်မည့် ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လက်ရှိနှင့် တတိယမြောက် ထောင်စုနှစ်ပင် ဖြစ်သည်။
၂၁၀၉ ဧပြီ ၂၇ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ ရု(တ်)ဂျားစ် တက္ကသိုလ်ရှိ အိုးကွင်း အဆောက်အဦ၏ ကြမ်းခင်းပြင်အောက်တွင် ၂၀၀၉၊ ဧပြီ ၂၇ က စတင် မြှုပ်နှံထားရှိခဲ့သော အချိန်ဘူး (Time capsule) ကို နှစ်တရာကြာပြီးနောက် ပြန်လည်တူးဖော်ရန် ရည်စူးထားသော ရက်စွဲ။
၂၉၆၈ - တက္ကဆပ်ပြည်နယ်၊ အမာရီးလိုရှိ ဟီလီယမ်နှစ်တရာ ကာလကျောက်တိုင်တွင် အချိန်ဘူး လေးဘူး ပါဝင်နေပြီး နောက်ဆုံးတခုကို ယင်းတို့ စတင်သော့ခတ်ခဲ့သည့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နောင် နှစ် တထောင် ကြာသောအချိန်တွင် ဖွင့်ရန် ရည်စူးထားသည်။
၂၀၄၅ ဩဂုတ် ၁၂ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေကြတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ထိ လမ်းကြောင်း တလျှောက် ဖြစ်မည်။ ဖလော်ရီဒါရှိ အချို့ဒေသများသည် စုစုပေါင်း ခြောက်မိနစ်ကြာ ကြတ်မည် ဖြစ်၍ ကန် သမိုင်းတလျှောက်တွင် အကြာဆုံး အချိန် ဖြစ်မည်။
၂၀၆၁ နှစ်လယ်တွင် ဟေလီ ကြယ်တံခွန် ကမ္ဘာမြေသို့ တဖန် ချဉ်းကပ်လာမည်။
၂၀၆၉ နိုဝင်ဘာ ၁၁ - မာကျူရီဂြိုဟ် နေရှေ့က ဖြတ်သန်းခြင်း။
၂၀၈၈ အောက်တိုဘာ ၂၇ - မာကျူရီနှင့် ဂျူပီတာ ကြတ်ကြမည်။ ၁၇၀၈ ခုကတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သော်လည်း နေနှင့် အလွန်နီးကပ်နေ၍ ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပေ။
၂၀၉၀ စက်တင်ဘာ ၂၃ - ဗြိတိန်တွင် နေအပြည့်ကြတ်မည်။ ၁၉၉၉ ဩဂုတ် ၁၁ ရက်တုန်းက ကြတ်သည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ကြတ်မည် ဖြစ်သော်လည်း မြောက်ဘက်သို့ နည်းနည်း ရွေ့သွားမည့်အပြင် နေဝင်လုဆဲဆဲတွင် ကြတ်မည်။ ကွန်းဝေါတွင် အကြာဆုံး နေကြတ်ချိန်မှာ ၂ မိနစ်နှင့် ၁၀ စက္ကန့် ဖြစ်မည်။ ၁၆၉၉ စက်တင်ဘာ ၂၃ တုန်းက ကြတ်သကဲ့သို့ ရက်လ တူညီသည်။
၂၀၉၄ ဧပြီ ၇ - မာကျူရီသည် ဂျူပီတာပေါ်၌ ကြတ်ပြန်ဦးမည်။ နေနှင့် အလွန်နီးကပ်သောကြောင့် ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။
၂၁၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ - သောကြာဂြိုဟ် နေရှေ့က ဖြတ်မည်။
၂၁၂၃ စက်တင်ဘာ ၁၄ - At 15:28 UTC, သောကြာဂြိုဟ်သည် ဂျူပီတာပေါ်၌ နေကြတ်မည်။
၂၁၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၈ - သောကြာဂြိုဟ် နေရှေ့က ဖြတ်ဦးမည်။
၂၁၂၆ ဇူလိုင် ၂၉ - ၁၆း၀၈ UTC တွင် မာကျူရီသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် နေကြတ်မည်။
၂၁၃၃ ဒီဇင်ဘာ ၃ - 14:14 UTC တွင်၊ မာကျူရီသည် သောကြာဂြိုဟ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၁၉၇ စက်တင်ဘာ ၂ - သောကြာဂြိုဟ်သည် စပိုင်ကာကြယ်ရှေ့က ဖြတ်သွားမည်။ နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော အချိန်မှာ ၁၇၈၃ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ဖြစ်သည်။
၂၁၉၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ကမ္ဘာ၏ အရံလသည် နက်ပကျွန်းပေါ်၌ ကြတ်မည်။
၂၂၀၉ နှင့် ၂၂၈၄ - ဟေလီကြယ်တံခွန် နေနှင့် အနီးဆုံးအမှတ်နေရာသို့ ရောက်လာမည့် နှစ်များ။
၂၂၂၁ - အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၂၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂ - 12:32 UTC အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ဂျူပီတာပေါ် ကြတ်မည်။
၂၂၃၈/၃၉ - ဂျူပီတာနှင့် စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။ (နောက်ဆုံး သုံးကြိမ် ယှဉ်ပူးခြင်းသည် ၁၉၈၁ တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်)
၂၂၄၃ ဩဂုတ် ၁၂ 04:52 UTC တွင် သောကြာသည် စနေပေါ်ကြတ်မည်။
၂၂၄၇ ဇွန် ၁၁ - သောကြာဂြိုဟ် နေရှေ့က ဖြတ်မည်။
၂၂၅၁ မတ် ၄ - 10:52 UTC သောကြာဂြိုဟ် ယူရေးနပ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၂၅၂ တွင် ဂြိုဟ်သိမ်ဖြစ်သော အော်ကပ်သည် ၎င်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ၂၀၀၄ မှ စတင်ရေတွက်လျှင် နေကို ပတ်ခြင်း တပတ်ပြည့်မည်။ ပတ်လမ်းတွက်ချက်မှုအရ ၎င်း၏ ပတ်လမ်းသည် မြေကမ္ဘာနှစ် ၂၄၈ နှစ် ကြာသည်။
၂၂၅၃ ဩဂုတ် ၁ - မာကျူရီ(ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်)သည် ရက်ဂူးလပ်ပေါ် ကြတ်မည်။ (နောက်ဆုံး ကြတ်ခဲ့ချိန်မှာ ဘီစီ ၃၆၄ ဩဂုတ် ၁၃ က ဖြစ်သည်)
၂၂၅၅ ဇွန် ၉ - သောကြာ နေရှေ့က ဖြတ်မည်။
၂၂၅၆ မှ ၂၂၅၈ ထိ - အဲရစ်ခေါ် ဂြိုဟ်ပုသည် စတင်တွေ့ရှိသည့် အချိန်မှ စ၍ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အနီးဆုံး နေရာသို့ ရောက်ရှိမည်။
၂၂၇၁ အောက်တိုဘာ ၆ - သောကြာနှင့် ရက်ဂူးလပ်တို့ နီးကပ်စွာ ပူးမည်၊ သောကြာဂြိုဟ်အရိပ် ရက်ဂူးလပ်ပေါ် ကြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်။
၂၂၈၁/၈၂ - ယူရေးနပ်၊ နက်ပကျွန်းနှင့် ပလူတိုတို့ သုံးပွင့်ဆိုင်ကာ သုံးနားညီတြိဂံကဲ့သို့ တိကျစွာ ပူးမည်။ နောက်ဆုံး ပူးခဲ့သည်မှာ ၁၇၆၉ နှင့် ၁၇၇၀ တွင် ဖြစ်သည်။
၂၂၈၇ ဩဂုတ် ၂၈ တနင်္ဂနွေ - အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် ကမ္ဘာသည် ၂၀၀၃ ဩဂုတ် ၂၇ ကတည်းက ပထမဆုံး အနီးစပ်ဆုံး ချဉ်းကပ်လာကြမည်။
၂၂၈၈ - ဂြိုဟ်သိမ် ဖြစ်သော ကွာအော သည် ၎င်းကို စတင်တွေ့ရှိသော ၂၀၀၂ ကတည်းကစ၍ ပထမဆုံး ပတ်လမ်း တပတ် ပြည့်မည်။ ပတ်လမ်းတွက်ချက်မှုများအရ တပတ်ပြည့်ရန် မြေကမ္ဘာနှစ် ၂၈၆ နှစ် ကြာသည်။
၂၃၀၇ စက်တင်ဘာ ၁၁ - 22:50 UTC သောကြာသည် ယူရေးနပ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၃၁၃ - အင်္ဂါ - ကြာသပတေး (ဂျူပီတာ) သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၃၁၉ - အင်္ဂါ - စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၃၂၇ ဇွန် ၄ - 00:54 UTC သောကြာသည် အင်္ဂါပေါ် ကြတ်မည်။
၂၃၃၅ အောက်တိုဘာ ၈ - 14:51 UTC သောကြာသည် ကြာသပတေးပေါ် ကြတ်မည်။
၂၃၅၁ ဧပြီ ၇ - 17:22 UTC ဗုဒ္ဓဟူးသည် ယူရေးနပ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၃၆၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ - သောကြာ နေရှေ့က ဖြတ်မည်။
၂၃၆၅ - ဟေလီကြယ်တံခွန် အနီးကပ်ဆုံး နေရာသို့ ရောက်လာမည်။
၂၃၆၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ - သောကြာ နေရှေ့က ဖြတ်မည်။
၂၃၈၈ - အင်္ဂါ - စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၃၉၁ မေ ၁၁ - ဗုဒ္ဓဟူးသည် နေရှေ့က တပိုင်း ဖြတ်မည်။
၂၄၀၀ နိုဝင်ဘာ ၁၇ - သောကြာသည် အန်တာရက်ပေါ် ကြတ်မည်။ (နောက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ဘီစီ ၅၂၅ စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင် ဖြစ်သည်)
၂၄၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ - 01:38 UTC သောကြာသည် ယူရေးနပ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၄၂၆ - ပလူတိုသည် ၎င်းကို စတွေ့ကတည်းက ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပတ်လမ်း ပြည့်မည်။
၂၄၅၆ - အင်္ဂါ - ကြာသပတေး သုံးကြိမ် ပူးမည်။
၂၄၇၈ ဩဂုတ် ၂၉ - 23:11 UTC အင်္ဂါသည် ကြာသပတေးပေါ် ကြတ်မည်။
၂၄၉၀ ဇွန် ၁၂ - သောကြာ နေရှေ့ ဖြတ်မည်။
၂၄၉၂ မေ ၆ - ပလူတိုနှင့် ကျန် ဂြိုဟ် ရှစ်လုံးသည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ၉၀ ဒီဂရီ ကျသော အဝန်းပိုင်း တခုအတွင်း ကျရောက်နေမည်။ ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၉၄၉ ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
၂၄၉၈ ဇွန် ၁၀ - သောကြာဂြိုဟ် နေရှေ့ ဖြတ်မည်။
၂၅၁၅ ဧပြီ ၇ - 10:37 UTC အင်္ဂါသည် နက်ပကျွန်းပေါ် ကြတ်မည်။
၂၅၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၅ - 22:41 UTC သောကြာသည် စနေပေါ် ကြတ်မည်။
၂၅၆၂ - ဂြိုဟ်ပု အဲရစ်သည် ၎င်းကို စတွေ့သည် ၂၀၀၅ မှ စရေသော် ဤနှစ်တွင် နေကိုပတ်ခြင်း တပတ်ပြည့်မည်။
၂၅၉၉ - အင်္ဂါ - ကြာသပတေး သုံးကြိမ် ပူးကပ်မည်။
၂၆၀၀ မေ ၅ - ၂၁၅၁ ခုနှစ်ကတည်းက လန်ဒန်တွင် မြင်ခဲ့သော နေအပြည့်ကြတ်ခြင်းကို နှစ် ၄၀၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်မြင်ရမည်။
၂၆၀၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ - သောကြာ နေရှေ့ဖြတ်မည်။
၂၆၀၈ မေ ၁၃ - ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် နေရှေ့က လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဖြတ်မည်။
၂၆၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ - သောကြာ နေရှေ့ တပိုင်းဖြတ်မည်။
၂၆၂၆/၂၇ - အင်္ဂါ စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၆၂၉ - အင်္ဂါ - စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်ဦးမည်။
၂၆၄၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ - 11:17 UTC သောကြာသည် နက်ပကျွန်းပေါ် ကြတ်မည်။
၂၆၅၀ စက်တင်ဘာ ၃ - ကမ္ဘာနှင့် အင်္ဂါကြား အကွာအဝေးသည် မှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင် အနည်းဆုံး အကွာအဝေးဖြစ်သော ၅၅,၆၅၁,၅၈၂.၁၁၈ ကီလိုမီတာသို့ ရောက်ရှိမည်။
ပထမဆုံး နီးကပ်ခဲ့သော ၂၂၈၇ ဩဂုတ် ၂၈ ကထက် ၃၇,၀၀၀ ကီလိုမီတာ ပိုနီးမည်။ နောက်တခါ ထပ်မံ နီးကပ်ရန် အချိန်မှာ ၂၇၂၉ စက်တင်ဘာ ၈ ဖြစ်မည်။
၂၆၅၅/၅၆ - ကြာသပတေး - စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၆၆၃ - အင်္ဂါ စနေ သုံးကြိမ် ယှဉ်ပူးမည်။
၂၆၉၉/၂၇၀၀ - အင်္ဂါ ကြာသပတေး၊ အင်္ဂါ နက်ပကျွန်း နှင့် ကြာသပတေး နက်ပကျွန်းတို့ကြား သုံးကြိမ် ယှဉ်ပူးကြခြင်း ဖြစ်မည်။
၂၇၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၄ - ကြာသပတေးသည် ယူရေးနပ်ရှေ့မှ ဖြတ်မည်။ ၁၉၁၄ မေ ၃ ကတည်းက ပထမဆုံး ဖြစ်မည်။
၂၇၂၉ စက်တင်ဘာ ၈ - အင်္ဂါနှင့် ကမ္ဘာကြား မှတ်တမ်းတင်ရလောက်သော အနီးကပ်ဆုံး ၅၅,၆၅၁,၀၃၃.၁၂၂ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးသို့ ရောက်ရှိလာမည်။
၂၆၅၀ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်က ဖြစ်ခဲ့သော အကွာအဝေးထက် ၅၄၉ ကီလိုမီတာ မဆိုစလောက် ပိုနီးလာခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၇၃၃ ဇွန် ၁၅ - သောကြာ နေရှေ့ ဖြတ်မည်။
၂၇၄၁ ဇွန် ၁၃ - သောကြာ နေရှေ့ ဖြတ်မည်။
၂၇၄၂ - အင်္ဂါ ကြာသပတေး သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၇၄၄ - အင်္ဂါ ကြာသပတေး သုံးကြိမ် ယှဉ်ပူးမည်။
၂၇၆၁ - အင်္ဂါ စနေ သုံးကြိမ် ကပ်ပူးမည်။
၂၇၈၁ ဒီဇင်ဘာ ၃ - 06:45 UTC သောကြာသည် နက်ပကျွန်းပေါ် ကြတ်မည်။
၂၇၉၁ - အင်္ဂါ ကြာသပတေး သုံးကြိမ်း ပူးကပ်မည်။
၂၇၉၄/၉၅ - ကြာသပတေး စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
အိကဲယ စဲကိ ကြယ်တံခွန်၏ အကြွင်းအကျန်များသည် နေအဖွဲ့အစည်း အတွင်းပိုင်းသို့ ပြန်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ ၁၉၆၅ - ၁၉၆၆ က ကမ္ဘာမှ နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ နေဆီသို့ ချဉ်းကပ်သွားစဉ် သုံးပိုင်း ကွဲထွက်သွားခဲ့သည်။
၂၈၁၆ မတ် ၂၅ - 15:47 UTC ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကြာသပတေးပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၁၇ မတ် ၆ - 9:36 UTC သောကြာသည် စနေပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၁၈ ဧပြီ ၁၁ - 20:41 UTC ဗုဒ္ဓဟူးသည် အင်္ဂါပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ - 10:50 UTC အင်္ဂါသည် ယူရေးနပ်ပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၂၉/၃၀ - အင်္ဂါ စနေ သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၈၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ - 09:40 UTC သောကြာသည် အင်္ဂါပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၄၂/၄၃ - အင်္ဂါ ကြာသပတေး သုံးကြိမ် ပူးယှဉ်မည်။
၂၈၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ - သောကြာ နေရှေ့ ဖြတ်မည်။
၂၈၅၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ - သောကြာ နေရှေ့ တပိုင်း ဖြတ်မည်။
၂၈၅၅ ဇူလိုင် ၂၀ - 05:15 UTC ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကြာသပတေးပေါ် ကြတ်မည်။
၂၈၆၆ - အင်္ဂါ စနေ သုံးကြိမ် ကပ်ပူးမည်။
၂၈၈၀ မတ် ၁၆ - ကမ္ဘာနီးဝတ္ထု (Near-Earth object) ဖြစ်သော ဂြိုဟ်သိမ် (၂၉၀၇၅) ၁၉၅၀ ဒီအေ သည် ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မည့် အလားအလာ ရှိသည်ဟု ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော ရက်ဖြစ်သည်။
၂၀၉၉ - လေ့လာမှု တရပ်အရ၊ အမေဇုန် မိုးသစ်တော၏ ၈၃ % သည် ပျက်စီးပြီး ဖြစ်မည်။
၂၁၀၀ ထိတွင်၊ ၂၁ ရာစု အစ၌ တည်ရှိနေသော ငှက်မျိုးစိတ်များ၏ ၁၂ % သည် မျိုးတုံးမည် သို့မဟုတ် မျိုးတုံးရန် အန္တရာယ်နှင့် ကြုံရမည်။
၂၁၀၀ ထိတွင်၊ ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ မှစ၍ ဝုဒ်ဟိုး သမုဒ္ဒရာလေ့လာရေး ကော့လိပ်ကျောင်း၏ လေ့လာချက်အရ၊ အင်ပါယာ ပင်ဂွင်းများသည် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မျိုးတုံးမည့် ချောက်ကမ်းပါးသို့ တွန်းပို့ခြင်း ခံရမည်။ သင်္ချာပုံစံ မိုဒယ်များ တည်ဆောက် လေ့လာမှုများက ပြသနေသည်မှာ ရာသီဥတု ပူနွေးလာ၍ ပင်လယ်ရေခဲများ ဆုံးရှုံးရလျှင် အန္တာတိကတိုက်နေ အင်ပါယာ ပင်ဂွင်းအုပ်ကို ထိခိုက်စေပြီး၊ ရာစုနှစ်အကုန်၌ အုပ်စု ဦးရေ ၈၇ % သို့ ထိုးဆင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာအရ ကန် သန်းခေါင်စာရင်းဌာနက ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၂၀၃၀ တွင် သန်း ၈၄၀၀ (၈.၄ ဘီလီယံ) ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
ပြင်သစ်လူမျိုး လူဦးရေတွက်ဆပညာရှင် (demographist) အီမာနူဝယ် တော့ဒ်က ၂၀၃၀ တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁၀၀ % နီးပါးသည် စာတတ်မြောက်ကြလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ 
သက်ကြီးဗေဒပညာရှင် (gerontologist) အော်ဘရီ ဒယ် ဂရေးက ၂၀၃၆ လောက်တွင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကုသနိုင်မည့် နည်းလမ်း အခွင့်အရေး ၅၀ စီ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ 
ကမ္ဘာလူဦးရေသည် ၂၀၅၀ တွင် သန်း ၉၃၀၀ (၉.၃ ဘီလီယံ) သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေဌာနက ခန့်မှန်းသည်။
ပြင်သစ်လူမျိုး လူဦးရေတွက်ဆပညာရှင် အီမာနူဝယ် တော့ဒ်က ၂၀၅၀ တွင် လူဦးရေ တိုးတက်နှုန်း၊ မွေးဖွားနှုန်း တန့်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ 
၂၀၅၀ တွင် ဗြိတိန်သည် ဥရောပတိုက်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာ၌ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူများကို လက်ခံသည့် တတိယအကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ စီမံချက်များက ခန့်မှန်းသည်။
၂၀၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ - ဂိုးဒမန်း ဆက် လေ့လာချက်တခု အရ၊ တရုတ်၊ ကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနှင့် မက္ကဆီကိုတို့သည် ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံး စီးပွားရေးနိုင်ငံများ ဖြစ်လာမည်။
၂၁၆၀ - ၂၀၁၀ တွင် မွေးဖွားသော ကလေးများသည် ၂၁၆၀ ထိ အသက်ရှင်နေဦးမည်ဟု အချို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်နေသည်။
ကုလသမဂ္ဂ သန်းခေါင်စာရင်းဌာနအရ၊ ၂၂၀၀ ရောက်သော် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် လူများ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည် ၁၀၀ ဝန်းကျင် ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၈.၅ ဘီလီယံ ထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်များသည် နောင် သက်တမ်း ဆွဲဆန့်နိုင်သည့် နည်းပညာများ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါနှင့် အနာဂတ်တွင် မွေးဖွားနှုန်းများ ပြောင်းလဲလာသည့်အခါတွင် လိုက်ပါ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ကုလက ပြောသည်။
၂၂ ရာစု - နောင် နှစ်တရာဟူသော သူ့စာအုပ်တွင်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ဂျော့ ဖရိုင်းမင်းက ခန့်မှန်းသည်မှာ ရာစုနှစ် စတင်သည်နှင့် မက္ကဆီကိုနှင့် ကန်ကြား ပါဝါလုမှုများ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြမည် ဆိုသည်။ မက္ကဆီကိုသည် စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးအရ ကန်ကို စိန်ခေါ်နိုင်သော အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ကန်တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ရှိသော မက္ကဆီကန် အများစုက မက္ကဆီကို ဦးဆောင်ခြင်းကို ရွေးချယ်တောင်းဆိုလာကြမည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် နောင်လာမည့် ရာစုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်း၌ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုချက် ဖြစ်လာမည့် မြောက်အမေရိက၌ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက် ယှဉ်ပြိုင်လာကြမည် ဖြစ်သည်။
တူးရင်းစမ်းသပ်ချက်ကို အောင်မြင်သည့် ပထမဆုံး စက်နှင့်အတူ ပထမဆုံး အားကောင်းသော အသိဉာဏ်တုနည်းပညာ (AI) သည် ၂၀၂၉ တွင် တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု OCR နည်းပညာကို တီထွင်သူ ရေး ကာဇဝေးက မျှော်လင့်သည်။ (တူးရင်းစမ်းသပ်ချက် (turing test) ဆိုသည်မှာ လူတယောက်ကို ကွန်ပျူတာနှင့် လူကြား ဖြေဆိုသော အဖြေများကို ခွဲခြားခိုင်းပြီး ကွန်ပျူတာသည် လူဦးနှောက်ကဲ့သို့ သဘာဝကျစွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ၊ ဖြေဆိုထားသော မေးခွန်းများကို ကြည့်ပြီး ဤဟာသည် ကွန်ပျူတာ၏ ဖြေဆိုချက် ဖြစ်သည်၊ ထိုဟာသည် လူ၏ ဖြေဆိုချက် ဖြစ်သည် စသော စမ်းသပ်ချက် ဖြစ်သည်)
၂၀၅၀ တွင် အာကာသကြိုးတန်း (space elevator) ကို တည်ဆောက်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းသည်။
အသံထက်မြန် စီးပွားဖြစ် လေခရီးသွားခြင်း (commercial hypersonic air travel) သည် ၂၀၅၀ တွင် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု မှန်းဆသည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင် ဖြန့်ချိရေးကို ၂၀၅၀ တွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်များ (renewable energies) ဖြင့်သာ ဖြန့်ဝေရန် စီစဉ်ထားသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ တောင် ဂလိုဆက်စတာရှိုင်းယားပြည်နယ်၊ သွန်းဘာရီ အနီးတွင် ရှိသော ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် စတင် ဖျက်ဆီးပိတ်သိမ်းလိုက်သော အိုးဘာရီ နူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဝင်းနေရာကို အန္တရာယ် မရှိစေရန် သုတ်သင် ရှင်းလင်း သိမ်းကောက်ခြင်းသည် ၂၀၉၂ နှင့် ၂၁၀၁ ကြားတွင် အပြီးသတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု အစီအစဉ် ချထားသည်။
ဒီစကာဗာရီ ချန်နယ် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "ထူးကဲတဲ့ အင်ဂျင်နီယာအတတ်" တွင် ပါသည့်အရ၊ ဂျပန်လူမျိုးတို့ ဆောက်ရန် တာစူထားသည့် ရှိမိဇု မဟာပိရမစ်မြို့တော်ကြီးသည် ၂၁၁၀ ထိတွင် အပြီးသတ်နိုင်မည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က အစပြုခဲ့သည့် အသိဉာဏ်တုနည်းပညာအပေါ် နှစ်တရာ လေ့လာခြင်း (AI100) သည် ၂၁၁၅ ၌ နိဂုံးချုပ်မည် ဖြစ်သည်။
၂၁၆၂ နှင့် နောက်ပိုင်း၊ ၂၀၁၂ က ပျက်ယွင်းပြီဟု ကြေညာထားသော အင်ဗီဆက် (Envisat) ဂြိုဟ်တုသည် ၂၁၆၂ ထက် မစောစေဘဲ ပတ်လမ်းမှ ကျလာပြီး၊ လေထုထဲတွင် လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားမည်ဟု မျှော်မှန်းသည်။
၂၂၀၀ အထိ၊ မြေကမ္ဘာသည် နိကိုလိုင်း ကာဒါရှက် (Nicolai Kardashev) ၏ တနှစ်လျှင် စွမ်းအင် အသုံးပြုနှုန်း ၁ % တိုးတက်လာသည့် တွက်ချက်မှုအရ ပုံစံ တစ် ယဉ်ကျေးမှု တရပ် ပေါ်ထွန်းလာမည် ဖြစ်သည်။
၃ ထောင်စုနှစ်အတွင်း သိသာထင်ရှား ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဒက်စမွန် တူးတူး ဂျော့ ဒဗလျူ ဘုရှ်
ဆက်ဒန်ဟူစိန် အဲလိဇဘက် ၂
အိန်ဂျလာ မာကယ် ဂျွန်ဟောင်းဝဒ်
စမတ်ဖုန်း နှင့် မိုဘိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်စနစ်
IPv6 (အင်တာနက် ပရိုတိုကောလိပ်စာ)
မြေဆွဲအားလှိုင်းများကို ပထမဆုံး တွေ့ရှိခြင်း
United States Naval Observatory, "The 21st Century and the 3rd Millennium:When Did They Begin?"
Associated Press (2001-01-01)။ Y2K It Wasn't, but It WasaParty။ Los Angeles Times။ 2015-10-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Total Midyear Population for the World: 1950–2050". U.S. Census Bureau. 2008-12-15. Retrieved 2009-03-30.
Todd, Emmanuel (2003). After the Empire: The Breakdown of the American Order. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-13102-X.
Health and Science Correspondent Kate Kelland. "Who wants to live forever? Scientist sees aging cured". Reuters. Retrieved 2013-01-10.
"World population to reach 9.1 billion in 2050, UN projects". UN News Center. 24 February 2005.
"Britain 'biggest in EU by 2050'"၊ BBC News၊ 12 March 2009။
Wilson, Dominic (March 28, 2007). "The N-11: More Than an Acronym" 153. Archived 11 June 2009 at the Wayback Machine.
Laurance, Jeremy။ "Has the elixir of youth come of age?"၊ The Independent၊ London: The Independent၊ 2010-05-12။ 2010-05-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on May 15, 2010။
World population in 2300. (PDF) . Retrieved on 2014-01-19.
Friedman, George (2009) The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, Anchor, ISBN 0767923057.
Kurzweil: AI aces Turing Test in 2029, and the Singularity arrives in 2045 – Fanatical Futurist by International Keynote Speaker Matthew Griffin
Rebecca Boyle (23 February 2012)။ Japanese Construction Company Plans Space Elevator By 2050။ Australian Popular Science။ 18 September 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Brown၊ Mark (June 20, 2011)။ Hypersonic Zehst jet will fly in 2050 on seaweed biofuel။ Conde Nast UK။ June 23, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 3, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Our future energy။ The Danish government။ The Danish Ministry of Climate and Energy (November 2011)။ 2012-04-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Enoch၊ Nick။ "World's oldest nuclear power station closes... but it will take 90 more years and £954m to clear it completely"၊ Daily Mail၊ February 29, 2012။ 29 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
New Mega-City Challenge – Concept Archived 13 September 2018 at the Wayback Machine.. Geekwidget (2010-03-29). Retrieved on 2014-01-19.
city in pyramid at YouTube
Stanford to host 100-year study on artificial intelligence။ Stanford University (16 December 2014)။ 19 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Study to Examine Effects of Artificial Intelligence။ The New York Times (15 December 2014)။ 19 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
One-Hundred Year Study of Artificial Intelligence: Reflections and Framing။ Eric Horvitz (2014)။ 19 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wall, Mike။ "Dead Satellite Envisat May Be Space Junk for 150 Years"၊ Huffington Post၊ Huffington Post၊ 2012-05-11။ 2012-05-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kaku, Michio (April 26, 2004). "How Advanced Could They Be?". Astrobiology Magazine. Retrieved on January 7, 2010.
Chronology – Quarter 1 1949။ April 8, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Mackenzie, Dana (2006-12-22). "The Poincaré Conjecture—Proved". Science 314 (5807): 1848–1849. American Association for the Advancement of Science. doi:10.1126/science.314.5807.1848. ISSN 0036-8075. PMID 17185565.
Higgs boson-like particle discovery claimed at LHC။ BBC News။6October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Castelvecchi, Davide (February 11, 2016). "Einstein's gravitational waves found at last". Nature News. doi:10.1038/nature.2016.19361. Retrieved on 2016-02-11.
ရာစုနှစ်များ နှင့် ထောင်စုနှစ်များ
၄ ထောင်စုနှစ် ၄၀ ရာစု ၃၉ ရာစု ၃၈ ရာစု ၃၇ ရာစု ၃၆ ရာစု ၃၅ ရာစု ၃၄ ရာစု ၃၃ ရာစု ၃၂ ရာစု ၃၁ ရာစု
၃ ထောင်စုနှစ် ၃၀ ရာစု ၂၉ ရာစု ၂၈ ရာစု ၂၇ ရာစု ၂၆ ရာစု ၂၅ ရာစု ၂၄ ရာစု ၂၃ ရာစု ၂၂ ရာစု ၂၁ ရာစု
၂ ထောင်စုနှစ် ၂၀ ရာစု ၁၉ ရာစု ၁၈ ရာစု ၁၇ ရာစု ၁၆ ရာစု ၁၅ ရာစု ၁၄ ရာစု ၁၃ ရာစု ၁၂ ရာစု ၁၁ ရာစု
၁ ထောင်စုနှစ် ၁၀ ရာစု ၉ ရာစု ၈ ရာစု ၇ ရာစု ၆ ရာစု ၅ ရာစု ၄ ရာစု ၃ ရာစု ၂ ရာစု ၁ ရာစု
၁ ထောင်စုနှစ် ၁ ရာစု ၂ ရာစု ၃ ရာစု ၄ ရာစု ၅ ရာစု ၆ ရာစု ၇ ရာစု ၈ ရာစု ၉ ရာစု ၁၀ ရာစု
၂ ထောင်စုနှစ် ၁၁ ရာစု ၁၂ ရာစု ၁၃ ရာစု ၁၄ ရာစု ၁၅ ရာစု ၁၆ ရာစု ၁၇ ရာစု ၁၈ ရာစု ၁၉ ရာစု ၂၀ ရာစု
၃ ထောင်စုနှစ် ၂၁ ရာစု ၂၂ ရာစု ၂၃ ရာစု ၂၄ ရာစု ၂၅ ရာစု ၂၆ ရာစု ၂၇ ရာစု ၂၈ ရာစု ၂၉ ရာစု ၃၀ ရာစု